शनिबार, २७ असार २०७७, ०२ : ०७
मुटु जोगाउने काइदा
अत्यधिक चिल्लो खाना, ड्राइफुडको नियमित सेवनले समेत हृदयाघातको जोखिम बढाउँछ । भिटामिन ई, मैगनिसियम, फाइवर, पोटासियम रहेको खानेकुरा खाने हो भने यसले हृदयाघातको जोखिम कम गराउँछ । तारेको खानेकुरा र नुनको मात्रा जति कम गर्नसक्यो उति उत्तम हुन्छ ।
यौन शक्ति बढाउने वैद्यखानाका चारवटा आर्युवेदिक औषधि छन् । सबैभन्दा धेरै यौन बद्र्धक आयुर्वेदिकका रूपमा बाजिकर शक्तिलाई लिइन्छ । दोस्रामा च्यवनप्राशलाई लिइन्छ । स्पेशल च्यवनप्राशमा पनि धेरै किसिमका जडिबुटी मिसाइने भएकाले यौनक्षमता बढाउने शक्तिशाली आयुर्वेदिक मानिन्छ । शिलाजित यौन शक्ति बढाउने तेस्रो शक्तिशाली आयुर्वेदिक औषधि हो । चौथोमा अश्वगन्धा चूर्ण हो ।
हास्यकलाकार सुरेन्द्र भन्छन् : ‘केटीहरुको हिपले लोभ्याउँछ’
कन्डम लाउँदा मज्जा नै आउँदैन त्यसैले श्रीमतीसँग सम्पर्क राख्दा कन्डम त्यति प्रयोग गर्दिन ।
सेक्स त राति नै गर्न मनपर्छ
दुई प्रेमजोडीहरुबीचको मायाको रङ हो ।
हृदयाघातको जोखिम महिलामा भन्दा पुरुषमा धेरै हुन्छ । करिब ८० प्रतिशत हृदयाघात पुरुषमा हुने गरेको पाइएको छ । ‘मेल सेक्स ईज इट सेल्फ रिक्स फ्याक्टर’ मानिन्छ । तर हृदयाघात भइसकेपछि पुरुषको तुलनामा महिलालाई बढी जोखिम हुन्छ ।
महिनावारी भएको दिनको १० औं दिनदेखि २० औं दिनभित्रको समय बच्चा बस्नका लागि उपयुक्त समय हो । यो समयमा यौन सम्पर्क भए बच्चा बस्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
सडेन कार्डियाक अरेस्ट र सेक्स
हालै भएको एउटा शोध अध्ययनअनुसार सेक्स गर्दा सडेन कार्डियाक अरेस्ट महिलाको तुलनामा पुरुषलाई धेरै हुन्छ तर यो अनुसन्धानले कहिलेकाहीमात्र यस्तो हुने बताउँछ । अमेरिकाको सिडर सायनाय हर्ट इन्स्टिच्युटका डाक्टर सुमित चुघले ४ हजार ५ सय ५७ यस्ता समस्यालाई जाँच गरेका छन् ।
प्रायः मानिसहरुको प्रश्न हुन्छ, एन्टिबायोटिक औषधि खाइरहेको मान्छेले रक्सी पिउनु हुन्छ कि हुँदैन ? कतिपय महिलाहरु पार्टीमा गएका बेला रक्सी नखानुको कारण सोधे भने आफूले एन्टिबायोटिक खाइरहेको बताउँछन् । खासगरी गर्भवती महिलाहरुको यही जवाफ दिने गर्छन् । उनीहरु प्रायः यस्ता पार्टीमा गर्भवती भएको कुरा लुकाउँछन् ।
कुकुरले टोक्यो, सुई लगाइहालौं
जाडो बढ्यो, दिन छोटो भयो । कार्यालयदेखि घर फर्कँदा होस् वा कतै पुगेर फर्कँदाफर्कँदै किन नहोस्, रात परिहाल्छ । रात पर्नासाथ भुस्याहा कुकुरले टोक्ला कि भन्ने डर दिनको तुलनामा बढी हुन्छ । हुन त नेपाल सरकारले कुकुर व्यवस्थापन गर्न करोडौं खर्च गरेको छ तर खासै उपलब्धिमूलक बन्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा कुकुरदेखि आफैँ जोगिएर हिँड्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका जनरल फिजिसियन डाक्टर शेरबहादुर पुन ।
अत्याधिक टाउको दुख्यो, माइग्रेन पो भयो की !
हिजोआज प्राय मानिसलाई हुलमुलमा जाँदा, धेरै कलरहरु झल्याकझुलुक्क देखिरहँदा वा टिभी हेरिरहँदा अत्यधिक टाउको दुख्ने समस्या देखिन थालेको छ । यसरी अत्यधिक टाउनको दुख्ने समस्या तपाईंमा पनि छ भने तुरुन्तै उपचार गर्न सुझाएका छन्, ब्लु लोटस अस्पतालका अकुपन्चरिष्ट डा. बिशाल श्रैष्ठले । उनका अनुसार सबै टाउको दुखाइमा माइग्रेन नहुन सक्छ तर टाउको दुखाइको अन्य कारण भेटिएन भने त्यो माइग्रेन हुनसक्छ ।
प्रविधि तथा अन्य सुविधाका कारण मानिसहरुमा मोटोपनको समस्याले खुबै सताउन थालेको छ । भर्खरका युवाहरुको पनि अन्य सबै भाग फिट भएतापनि पेट भने पुत्लुक्क बाहिर निस्किएको हुन्छ । हुन त घरमा आमाबाबा छोरो या छोरी मोटाए भनेर खुशि हुँदाहुन् तर यसले बिभिन्न प्रकारका रोगलाई समेत निम्तो दिन्छ ।
जाडोमा घुँडाको समस्यालाई बेवास्ता नगरौं
जाडोमा हातखुट्टाका जोर्नी दुख्नु गम्भीर समस्या हो । एकपटक यस्तो समस्या देखियो भने यसबाट मुक्त हुन निकै गाह्रो हुने अनुभवीहरु बताउँछन् । यसलाई बेवास्ता गर्दा भविष्यमा निकै भारी मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ । जाडोमा नसा खुम्चने, रक्तसञ्चार उच्च हुने तथा मुटुसम्बन्धी समस्या हुने भएकाले हाड जोर्नीमा समस्या उत्पन्न हुन्छ र दुख्छ ।
समस्या बन्दै वायु प्रदूषण
वायु प्रदूषण विकासशील देशको ठूलो समस्या बन्न थालेको कुरा नयाँ होइन । नयाँ कुरा त के हो भने देशकै राजधानी काठमाडौँ संसारकै सबैभन्दा प्रदूषित राजधानीमध्येमा गनिन थाल्यो । हालै विश्वव्यापी गरिएको एउटा अध्ययनले देशको सबैभन्दा प्रदूषित राजधानीमध्ये काठमाडौँलाई राखिएको हो । वायु प्रदूषण उच्चतम हुनु भनेको ग्यास च्याम्बरजस्तै हो ।